Iifoto ezininzi zokwenyani zeVivo Z5 ziyavela ezibonisa ubuhle bayo | I-Androidsis
Iifoto ezininzi zokwenene zeVivo Z5 ziyavela ezibonisa ubuhle bayo
Kwakhona sithetha ngayo I-Vivo Z5, Into elandelayo evela kumenzi odumileyo waseTshayina oza kuza kukhuphisana kwicandelo eligcweleyo lomgangatho ophakathi we-Android. Ukuthengiswa kakuhle kwale mobile kuyaxelwa kwangaphambili, kwaye konke ngenxa yeempawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha esele ziqinisekisiwe ngokusemthethweni kwitheko lakutsha nje, kunye nolunye isimanga esinokuthi sazi kulo qalisa umcimbi.
Isiphelo sendlela sele sihluziwe ngaphambili kwifoto apho ityhiliweyo okanye yaqinisekiswa khona, endaweni yoko Inkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwee-watts ezingama-22.5 inayo. Nangona ngoku ayisiyiyo enye, kodwa malunga iifoto ezininzis, kwezi unokutyhila ngakumbi kubunzulu bokubonakala kwakho konke, kunye nakwibhokisi yakho yokuthengisa kunye netshaja.
IVivo Z5 sisixhobo esakhiwe kakuhle esiqhayisa ngoyilo olungothusiyo, ukuba buthuntu. I-terminal ijongeka njengolunye udidi oluphakathi kwimarike, kodwa yahlukile ngeendlela ezincinci kakhulu, ezinje ngokubonakaliswa okuveliswe yindlu yemodyuli yokufota kunye nepaneli yangasemva yeselfowuni. Kokunye, ukuba bekungekho ilogo ebekwe kumqolo ongezantsi, sinokuyiphosisa ngenye i-smartphone ngamehlo.
Ngaphambili sinesikrini esiqhelekileyo Inotshi ukumila kwethontsi lamanzi kunye ne-bezels eziphakathi, ngelixa kwicala elingezantsi sikhubeka kwisithethi, izibuko le-USB-C kunye ne-3.5mm jack yomsindo. Itshaja iqinisekisa inkxaso ye-22.5-watt iteknoloji yokutshaja ngokukhawuleza eya kusetyenziswa ngumnxeba.
Kwelinye icala, ngokusekwe kwiindaba zangaphambili, kwaqinisekiswa ukuba ifowuni izakufika kunye Snapdragon 712, Iscreen se-AMOLED esinezixhobo zokufunda ngeminwe ezihlanganisiweyo, ibhetri yomthamo we-4,500 mAh, ikhamera engasemva engama-48 MP engasemva kwimodyuli yokufota kathathu, inzwa engaphambili eyi-32 MP kunye nemowudi yeMult-Turbo. Iya kukhutshwa nge-31 kaJulayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iifoto ezininzi zokwenene zeVivo Z5 ziyavela ezibonisa ubuhle bayo
I-Samsung Galaxy A50 ifumana uhlaziyo olutsha olunikezela ngekhamera ebhetele nangaphezulu